पीपीईको चिहान ! « Nepali Digital Newspaper
१८ चैत्र २०७६, मंगलवार ०८:१५
■ ई. नरोत्तम श्रेष्ठ
निष्पट्ट चकमन्न चुकरात ! बादलभित्र चट्याङको गडयाङगुडुङको पट्यारलाग्दो सन्त्रास !! हुरीले बोटबिरुवा बत्ताएको अत्यासलाग्दो वातावरण । लास नबोकेरै घाट दौडिरहेका मलामीका तँछाडमछाड लस्कर । बेवारिस लास… सन्त्रस्त लास, लास छुन काँपिरहेका मलामीका हातहरू । मानौँ, लास मुर्दा होइन, बिजुलीको नाङ्गो तार हो, पड्काउन ठिक्क पारेको बमको ‘स्वीच’ हो ।
सन्त्रासभित्र सुटुक्क आफूलाई समाहित गर्दै मेरा पदचाप चिहानतिर लम्किए । मेरो दृष्टि चिहानको छेउमा प्लाष्टिकको कात्रोमा बेरिएका बेवारिसे लासको थुप्रोतर्फ गयो । नराम्रोसँग धड्किरहेको मुटु बोकेर म लासको समीप पुगेँ । विस्तारै एक लासको कात्रो हटाउन थालेँ । त्यो साधारण लास थिएन । लासको हालत देख्दा यस्तो लाग्थ्यो कि कयौँ दिन अन्नपानी नखाई डलरको लप्का कोचि–कोचि विभत्स आत्महत्या गरिएको थियो ! भयङ्कर…..अति भयङ्कर !! ११ हजार भोल्टको करेन्टले मलाई झड्का दिएझैँ भयो ।
कुनै पनि लासको समिप जानु, स्पर्श गर्नु कति डरलाग्दो काम हो ! मानिसहरु भुतको नाम सुन्नासाथ डरले पिसाब तुर्काउँछन्, तर म त भुतकै दुनियाँमा थिएँ । मेरा इन्द्रियहरू काँपिरहेका थिए ।
आजसम्म कति मलामी गइयो तर कात्रोमा गोजी भेटेको थिइनँ । गोजी नै गोजी भएको कात्रोले बेरिएको लासले मेरो कुतूहल बढाउँदै गयो । कात्रोका पत्रहरू हटाएर उसको पहिचान गर्न चाहन्थेँ म । पहिचान गर्न लालायित मेरा भयाक्रान्त नजरहरू काँपिरहेका थिए । शनैःशनैः कात्रोका पत्रहरु खोल्दै गएँ ।
घोर आश्चर्य !! कात्रोका पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पत्र सबै पीपीईका थिए । कात्रोका पत्रभरि गोजीहरू भुक्क–भुक्क फुलेका थिए । कुनै गोजी एन–९५ मास्कले फुलेका थिए, कुनै स्यानिटाइजरका रागले, कुनै टेष्ट किटका टुक्राहरूले, कुनै थर्मामिटरका रापले । भित्री पीपीईका गोजीहरू राता र हरिया बिलले भरिभराउ थिए । बिलका पत्रहरू खोलेर पढ्न खोजेँ, डलरमा छापिएका बिलहरू मेरो मस्तिष्कको क्याल्कुलेटरले ठम्याउन सकेन । खुल्दै गए पत्रहरू तर खुल्न सकेन रहस्यको पर्दा । अन्तिम आवरणपछिको दृश्य झन् दर्दनाक थियो । तीन करोड आँशुका थोपाहरूको रापले लासको अनुहार पुरै डढेको थियो । गालामा डामिएको स्वस्तिक छाप कुहिएर डुङडुङती गन्हाइरहेको थियो । पूरै वातावरण प्रदुषणको रागले मेरा नाक, आँखा पिरो भयो । लास छोडेर बुर्कुर्सी ठोकेँ । …
(लेखक ‘मातृभूमिका लागि नेपाली’का केन्द्रीय परिषद सदस्य तथा कोषाध्यक्ष हुन् ।)